I-Covid ithulise isiphithiphithi sase-Vilakazi Street | Scrolla Izindaba
I-Covid ithulise isiphithiphithi sase-Vilakazi Street
UMusa Hlomoka, ogada izimoto utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi ezweni elijwayelekile, iVilakazi Street ngabe igcwele abashayeli abalwela izindawo zokupaka.
Kodwa leli akulona izwe elijwayelekile.
“Azikho izimoto futhi akukho myakazo. Sonke sithintekile ngendlela embi kakhulu,” kusho uMusa.
IVilakazi Street ese-Orlando West, e-Soweto ukuphela komgwaqo emhlabeni lapho kwake kwahlala khona amaqhawe ahlonishwayo.
Bobabili ababengomengameli uNelson Mandela kanye noArchbishop Desmond Tutu bake baba nezindlu kulo mgwaqo emashumini eminyaka eyedlule.
Uzokhumbuleka futhi njengomgwaqo wokuzijabulisa, ophithizelayo lapho izindawo zokudlela namathaveni aphaka ukudla kwaseAfrika abumbene futhi ahlangene ukujabulisa izivakashi zomhlaba nezasekhaya ngokufanayo.
UThabo Mdluli, ongumnikazi wendawo yokudlela yakwa-Nex Dor, uthe ufika kule ndawo nsuku zonke, kodwa amathemba akhe okonga ibhizinisi lakhe ayashabalala.
Utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi akazi nakancane ukuthi imali izoqhamukaphi ukukhokhela irenti kanye nabasebenzi, abebelokhu beholelwa ngemali abayilondolozile kusukela ngesikhathi sokugcina ukusebenza.
Uthe isinqumo sikahulumeni sokuvala ukudayiswa kotshwala akusona isixazululo ezinkingeni ezibhekene nezwe.
“Kunemakethe enkulu yotshwala engalawulwa ngokomthetho. Abantu abakwaziyo ukuwuthenga basawuthenga utshwala ngamanani entengo sphezulu. Abahluphekayo kuphela abashaywa kanzima yile mithetho,” kusho uThabo.
UMaphefo Phatsoane uqale ukusebenza kule ndawo yokudlela ngesikhathi iqalwa ngowezi-2012.
“Asikaze silibone ibhizinisi elinjengaleli. Ngisho nezinsuku lapho besiqala khona besisenamakhasimende ahloniphekile,” kusho uMaphefo.
UTony Mkhabela, ongumnikazi we-T & N Butcheries, obehambisa inyama, uthe i-Covid-19 imthinte kabi kakhulu.
“Ngihambisela amabhizinisi amaningi aseduze kwaseSoweto inyama. Kusukela i-Covid-19 ihlasele iNingizimu Afrika ibhizinisi liyancipha,” kusho uTony.
“Izindawo eziningi engizihambisela inyama yizindawo lapho zivamise ukuthengisa khona utshwala,” kusho uTony.